Nhau - Iyo ramangwana rekuvandudza maitiro einonzwa indasitiri
Zvechokwadi inonzwa semugadziri mukuru wepasi rose wedonje nemakemikari fiber anogadzira, China yakavaka yakakura uye yakakwana sisitimu yeindasitiri yemachira, indasitiri yemachira ine chekuita neindasitiri yekusimudzira-kumhanya, matanho ekutanga anoramba akazara, kunyanya, China ine huwandu hwevanhu. yebhiriyoni imwe nemazana matatu emamiriyoni inoramba ichiwedzera uye nekusimudzirwa kwemusika wekuda wepamba, uye kwete kwenguva yakareba manejimendi emagariro ezvakatipoteredza uye mutemo wakavhurika.
Kuti izvi zviitike, Du Yuzhou, purezidhendi weChina Textile Industry Association, anotenda zvakasimba kuti izvi zvinodiwa zvemukati hazvingobatsiri indasitiri yemachira yeChina kuti itore danho rekuita maindasitiri epasi rose, asi zvakare inobatsira kukurumidza kusimudzira kugona kweindasitiri kuburikidza nekudyidzana nedzimwe nyika. Mumakwikwi epasi rose anowedzera, iyo yakaderera yakawedzera kukosha inoburitsa fungidziro yekuti purofiti nzvimbo Inotapudza zuva nezuva.
Asi panguva imwecheteyo, Du Yuzhou akawedzerawo kuti indasitiri yezvigadzirwa zvemachira yekuChina kupedzisa basa idzva renhoroondo, inotarisana nematambudziko mazhinji.Kune dzimwe nyika, indasitiri yemachira yekuChina yakatarisana nemakwikwi akanyanya, uye chinangwa chemakwikwi chakawedzera zvishoma nezvishoma kusvika kune chitsva. nhanho yedambudziko idzva rekuvandudza kugona kwekugadzira kwevakatangira mune yepasi rose yekugadzirwa mode.Pamba, kuitwa kwesainzi pfungwa yebudiriro yakatarisana nezvipingamupinyi zvakakura pakukura kwakakura.Kuchinjana kwemari, mubereko, kugadzirisa mutero uye kuchengetedza simba uye kuburitsa. kuderedza
Kudyidzana pakati pemaketani emaindasitiri kuchatsiva makwikwi emukati akashata, uye makwikwi pamusoro pemhando achatsiva mutengo wars.Innovation uye nekukurumidza kupindura semakwikwi makuru emaindasitiri kumusoro.
Mukuwedzera, masangano ekutengeserana achaita basa rinowedzera rinokosha.
Chechishanu, indasitiri yekubatanidza ndiyo isingadzivisike maitiro, boka, centralization, kusimudzira kwakadzama ndiyo nzira isingadzivisiki.Mushure memakwikwi akakwana, bhizinesi kuitira kuti rigadzirise zviri nani kune zvakatipoteredza kuti rirarame, rinofanirwa kushingaira kujoina, kuburikidza nekugadzirisazve kubatanidzwa kana zano. kudyidzana kuvaka mapoka makuru, kuona homwe, kugadzirwa kwehunyanzvi, tekinoroji, simba revashandi, kugovera kwevatengi zviwanikwa, kuona kushanda kwakakura uye kugadzirwa kwemaindasitiri, kukwikwidza kwemusika, neketani yakazara yemaindasitiri sePut kushandiswa zvakanaka nekudaro kwakabatana kumusoro. yeindastiri, pari zvino iyi imwe nzira inotoratidza inkling pakutanga.
Pave nekudzikira.China checashmere indasitiri zviwanikwa uye zvakanakira kugadzirisa parizvino chero nyika pasi rose yakaoma kuenzanisa nekutsiva.Munhu ari mukati mezvidzidzo anofunga, kubva zvino chikamu chenyika yedu cashmere chigadzirwa pamusika wepasi rose chichaenderera mberi. Mabhizinesi anogona kuvandudza mabhureki avo nekuwana mhando dzedzimwe nyika dzine mukurumbira kana kumisikidza zvitoro zvavo.